> Resource> Video> otú ịgbanwe Mpịakọta na Media Files
Chọrọ a na omume nke nwere ike ịgbanwe olu ọdịyo nke mere na ọ ga-adị oke oké ma ọ bụ oke jụụ? Ezie na ọtụtụ media Player ma ọ bụ ọkà okwu nwere olu akara n'oge playback, ọ ka nwere ike ịbụ ihe manụ nsogbu na ọ na-ewe oge na ya. Na ụfọdụ faịlụ ebudatara bụ kama ala na-ege ntị ọbụna na ị na-eweli olu ka kacha larịị na kọmputa. N'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe na-normalize olu-adịgide adịgide.
Ekele Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), a ọkachamara video edezi ngwá ọrụ nke na-eme ya n'ụzọ dị ịrịba ama mfe dịkwuo / ibelata audio larịị a ọkachamara ụda. N'okpuru ebe m ga-akọwa otú ime nke a ole na ole clicks.
Rịba ama: Nke a na usoro dị na ma Windows na Mac n'elu ikpo okwu. N'okpuru ebe ndu Aga m ewere na Windows screenshots. N'ihi na ọrụ ndị na-achọ ịgbanwe olu ọdịyo na Mac, dị nnọọ na-agbaso otu nzọụkwụ iji Wondershare Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac).
1 mbubata gị mgbasa ozi faịlụ
Mgbe ibudatara na arụnyere a na-amụba olu software, nanị ịdọrọ na dobe audio & video faịlụ ka isi window. Alternatively, ị nwere ike pịa "Import" na-agagharị na gị faịlụ na nchekwa ma Ibu Ibu ha niile. Mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe ha n'ime Video usoro iheomume.
Rịba ama na fọrọ nke nta niile video & audio formats akwado, gụnyere WMV, MOV, AVI, MKV, MP4, mpg, MPEG, MOD, DV, MTS, AVCHD, M2TS, TS, MP3, AAC, MKA, na na.
2 Gbanwee olu ọdịyo na ala
Mgbe video faịlụ a bụ na ebe, abụọ pịa ya ikpughe edezi panel. Nke a panel dere ma video na ọdịyo edezi. Dezie ọdịyo faịlụ naanị, dị nnọọ pịa Audio kọlụm na ala ka ịnweta audio edezi window. Na olu olu akara submenu, megharia Mpịakọta slidebar ekpe ma ọ bụ aka nri ka iwelie ma ọ bụ ala ala olu. Mgbe ị na-ịgbanwe ya, ị nwere ike na-ege ntị ezigbo oge audio mmetụta site na ịpị play akara ngosi.
Dị nnọọ ka e gosiri na oyiyi window, ị nwekwara ike ịtọ Adalata na / agwụ si, hụchaa na picth, wdg
3 Zọpụta gbanwere agbanwe audio (video) faịlụ
Mgbe ị na-afọ ojuju na N'ihi ya, nanị kụrụ "Mepụta" ịzọpụta gị gbanwere agbanwe audio (video) faịlụ. Na ouput format window nke na-egosi, họrọ gị chọrọ format iji zọpụta ya na kpọmkwem nchekwa na kọmputa gị.
E wezụga bupu video kọmputa gị, ị nwere ike mbupụ presets maka ngwaọrụ gị dị ka iPhone 5, iPad Obere, iPod Touch, Xbox 360, PS3, ozugbo bulite video ka YouTube, ma ọ bụ ọkụ na-DVD.
Ego Atụmatụ: E wezụga n'ịgbanwe olu ọdịyo, ị pụrụ ime ihe na nke a vasatail video nchịkọta akụkọ software:
Foto dị na-na-na foto: Tinye multiple videos ke otu etiti ịgwa seveal eri nke otu akụkọ.
Ifriizi a etiti: Lekwasị anya a ihu n'ime ìgwè mmadụ, na ịtọ mbugharị na ya ngagharị na-eme ka fun!
Nchekwa onwe idaha nchọpụta: Chọọnụ ma kewaa idaha mgbanwe mfe chọta ezi gbaa.
Na ndị ọzọ ....
Olee otú Dịkwuo Mpịakọta nke Media Files